Haingo Fanampin’ilay Mofomamy Virtoaly: Ny Volavolan-dalàna Jordaniana Mikasika Ny Fifandraisandavitra · Global Voices teny Malagasy
Haingo Fanampin'ilay Mofomamy Virtoaly: Ny Volavolan-dalàna Jordaniana Mikasika Ny Fifandraisandavitra
Làlana manome fahefana ho an'ny Vaomieran'ny Fifandraisandavitra hanameloka, hanakana votoaty.
MpanoratraReem Al Masri
Voadika ny 12 Avrily 2019 11:41 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Jona 2014)
Pikasary nalaina avy tamin'ny lahatsarin'ny 7iber manazava ny lalàna momba ny fifandraisandavitra, nampiasaina teo ambany fahazoandàlana.
Navoaka tao amin'ny blaogin'ny 7iber, LaSilkee (“Wifi”;rohy maty) ny dika voalohany an'ity lahatsoratra ity.
Nandritra izay roa taona lasa izay, namoaka andian-dalàna maro izay manakenda ireo zo haneho hevitra malalaka sy hahazo vaovao i Jordania, ary nandrava ireo tanjon'ny governemanta izay nikendry ny hanao an'i Jordania ho foibem-paritany ho an'ireo indostrian'ny startup sy ny TIC (Teknolojian'ny Fampahalalam-baovao sy ny Serasera). Raha toa ka tsy ireo fanavaozana ny Lalàna mikasika ny Fanaovangazety sy ireo Famoahan-dahatsoratra tamin'ny 2012 no famerana ara-dalàna voalohany ny fahalalahana miteny anaty aterineto tao amin'ny firenena, naneho loza manambana avy hatrany ho an'ny aterineto misokatra sy ireo zon'olombelona kosa izy ireo. Mitaky ny fananan'ireo vohikala ”mamoaka votoaty mikasika an'i Jordania” fahazoandàlana io lalàna nahitsy io ankehitriny ary mamela ireo lehiben'ny toniandahatsoratra ho tomponandraikitra ara-dalàna amin'ireo fanehoankevitra mivoaka anatin'izany. Nitondra nankany amin'ny fanakanana vohikala miisa 300 izany tamin'ny volana Jona tamin'ny taona lasa. Tamin'ny volana Mey 2014, namoaka lalàna iray vaovao Miady Amin'ny Fampihorohoroana ireo manampahefana, izay manameloka ireo hetsika fanehoan-kevitra niomerika rehetra toa manohana ireo ”vondrona mpampihorohoro”, kanefa tsy manome famaritana mazava ny tena fonosin'ny ”fanohanana” sy ny ”fampihorohoroana”. Fanampiny farany amin'ity rafi-dalàna mametra ity ny andianà tolotra maro fanitsiana ny Lalàna mikasika ny Fifandraisandavitra, izay miandry ny adihevitra avy amin'ny Parlemanta ankehitriny.
Raha lany ireo fanitsiana ireo, mety hisy fiantraikany maro eo amin'ny kirakiran'ny mpisera sy eo amin'ireo indostria mpamokatra ara-niomerika. Manome baiko an'ireo orinasan'ny Fifandraisandavitra mba hanakana ireo votoaty mamoafady amin'ny aterineto amin'ny fomba miangona ilay volavolan-dalàna, na eo aza ireo tolotra aterineto ”azo antoka” (fanivanana ireo mpampiasa farany) izay atolotr'ireto mpamatsy ireto. Mety hanome ny governemanta karazana ”fiahiana ara-pitondrantena” an'ireo Jordaniana mpampiasa Aterineto ny famoriana ny sivana anaty Aterineto, milaza amin-dry zareo ny votoaty tokony na tsia tokony hidirany. Mety hisy fiantraikany eo amin'ny fidirana amin'ny votoaty tena ara-dalàna tsara toy ny vohikala fampianarana izay miresaka momba ny vatan'ny olombelona na ny fanabeazana ara-pananahana izany fanapahankevitra izany, ireo lohahevitra ireo izay samy sarotra ianarana avokoa ao Jordania, raha tsy noho ny Aterineto.
Hamela ny Vaomiera Fifehezana ny Fifandraisandavitra ny andraikitra hamoaka baiko mpanakana ireo votoaty ”mandika lalàna” rehetra koa io lalàna io. Anatinà firenena iray izay efa mampihatra ny sivana amin'ireo fanontàna an-taratasy sy amin'ireo sarimihetsika noho ireo singa ”vetaveta” sy ”mifanohitra amin'ny fitsipi-pitondrantena” izay mandika ny ”fehezan-dalàna ho an'ny daholobe”, dia natao ho eo ambanin'ny fanakaran'ny mpitantana ny Vaomiera ny famaritana ny atao hoe ”votoaty mandika lalàna”. Manampy trotraka izany ny fitakian'ireo volavolan-dalàna nasiam-panitsiana ireo ny hampihatoan'ireo orinasan'ny fifandraisandavitra ny tolotra Aterineton'ny olona iray raha toa ka mety hahita làlana mankany aminà votoaty heverina ho ”vetaveta” ity farany. Hiatrika sazy ireo Mpamatsy Tolotra Aterineto ireo raha toa ka tsy manaraka ireo baiko fampihatoana ny tolotry ny olontsotra.
Mamela ireo ”manampahefana voatokana” hahazo ny mombamomba ireo mpampiasa miaraka aminà didy avy amin'ny fitsaràna ireo fanitsiana ireo. Raha toa ka toa mifanaraka amin'ny fiarovana ny zo amin'ny fiainana manokana ny didy iray avy amin'ny fitsaràna, maro ireo rafitra mpanatanteraka ao Jordania no manana fahefana ara-pitsaràna, izay mahatonga azy ireo afaka mamoaka didy, tafiditra ao anatin'izany ny sampana fitsikilovana, ny governora, ary ny departemantan'ny polisy.
Fanalefaham-pitenenana ny filazàna fa tsy tena noraisina tsara araka ny tokony ho izy tao anatin'ilay volavolan-dalàna ny fandraisana andraikitra. Omen'ny lalàna ho an'ny Vaomiera Fifehezana ny Fifandraisandavitra ny zo hanenjika sy hanome sazy ireo mpandika fitsipika, nefa sady omeny azy koa ny fahefana hanao lalàna mba hamolavola fitsipika sy hamaritra ireo sazy rehetra azo ampiharina amin'ireo fandikàna. Fandikàna lehibe ny fitsipika araka ny lalàm-panorenan'ny fitantanana izany: Fanavahana ireo manampahefana mpanao lalàna sy ireo mpitsara. Mba hanaratsy kokoa ny raharaha, alefa any amin'ny tetibolan'ilay Vaomiera ny vola azo avy amin'ireo sazy ireo. Mampifangaro ny fitantanana ihany koa ilay lalàna amin'ny fampivelarana ny fari-piadidian'ny TRC amin'ny fandrindràna ny votoaty an-tsary sy feo, izay efa manana ny rafitra fandrindràna azy manokana sy sampana misahana azy ao amin'ny firenena.
Miandry ny faneken'ny Biraon'ny Antenimieran-dalàna sy ny Lafinkevitra ilay lalàna ankehitriny mba hanatrarana fandrafetana ara-dalàna. Araka ny tsingerim-piainana mahazatra an'ny fandrafetana lalàna, nanaiky ireo fanehoankevitry ny olompirenena mikasika ilay volavolan-dalàna hatramin'ny 8 Mey ny Biraon'ny Antenimieran-dalàna sy ny Lafinkevitra, mialoha ny hamerenana izany any amin'ny kabinetra izay handefa izany kosa any amin'ny Antenimiera roa ao amin'ny Parlemanta.
Namokatra ity lahatsary manaraka ity ny 7iber mba hanazavàna ny fomba hikasihan'ireo fanitsiana ireo ny Jordaniana mpampiasa. Amin'ny teny Arabo, miaraka amin'ny dika an-tsoratra amin'ny teny Anglisy.